Shirkadda CHP ee Çakırözer YHT Abonman ayaa ka jawaabtay Mushaharka Shaqaalaha | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraShirkadda CHP ee Çakırözer YHT Abonman ayaa ku jawaabtay Mushaharka Shaqaalaha
23 / 01 / 2020 06 Ankara, 26 Eskisehir, 42 Konya, Gobolka Central Anatolia, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, Headline, TURKEY
qiimaha chpli cakirozer yht sicirbararka qiimaha badan ee socodku wuxuu ka falceliyay
TCDD ayaa la sheegay inay kor u qaadayaan tigidhada xawaaraha sare (YHT) tigidhada. Sida ku xusan eedeymaha CHP's Utku Çakırözer, khidmadaha khidmadda YHT ee u dhexeeya Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, oo ay adeegsadaan ardayda iyo saraakiisha wax ka barata Ankara, waxay kordheen 480 TL ilaa 687 kun.
Utku Çakırözer, CHP Eskişehir Kuxigeenka ayaa ku Jawaabay
Utku Çakırözer, oo ahaa kuxigeenka Eskişehir CHP, wuxuu ka falceliyay safarka tigidhada tikidhada ee warbaahinta bulshada.
“Çakırözer, qaybtiisa“ tikidhada tareenka xawaaraha sare ku socda ee tareenka. 30-ka maalmood ee la diiwaangeliyay ee ay door bideen shaqaalaha khadka khadka Eskişehir-Ankara ayaa ka kordhay 624 lira ilaa 1.687 lira. 5.5 boqolkiiba mushaarka sarkaalka, 170 boqolkiiba tikidhada tareenka! Insaf… ”.
Tikidhada Xawaaraha Tareenka Xawaaraha Sare ku socda!
30-ka maalmood ee la diiwaangeliyay ee ay doorbidaan shaqaalaha khadka khadka Eskişehir-Ankara ayaa ka kordhay 624 lira ilaa 1.687 lira!
5.5 boqolkiiba mushaarka shaqaalaha rayidka ah,
Boqolkiiba 170 ayaa tigidhada tikidhada tareenka!
- Utku Çakırözer (@utkucakirozer) January 22, 2020
Cakirozer ee CHP wuxuu leeyahay ma jiro kor u qaadida TCDD, laakiin 'gabi ahaanba waxba ma dhicin xitaa haddii aysan wax dhicin'! Eskişehir-Ankara 624 lira bishii oo dhan ayaa la siiyaa markay ahayd 1687 lira. Diiwaangelinta Ankara-Konya Ankara-Eskişehir waxay kordhisay 170%, Ankara-Polatlı 200%. Diiwaan galinta dhalinyarada ayaa kordhay boqolkiiba 98! ”
TCDD waxay leedahay maya kor u qaad, laakiin 'xaqiiqdii wax baa dhacay xitaa haddii aysan wax dhicin'!
Eskişehir-Ankara 624 lira oo bil kasta si buuxda loosoo diro waxay ahayd 1687 lira.
Diiwaangelinta Ankara-Konya Ankara-Eskişehir waxay kordhay 170%, Ankara-Polatlı 200%.
Tirada dhalinyarada ayaa kordhay 98 boqolkiiba!
Waa tan lacagtii hore iyo tan cusub: pic.twitter.com/kukxreojav
- Utku Çakırözer (@utkucakirozer) January 23, 2020
Khubarada ayaa ka jawaabaya foorishada khatarta ah ee khadka taraamka ah ee Horn Horn
Gokcek wuxuu ka soo horjeeda Ankara Metrobus Action from Twitter
Kuşkan ayaa muujiyay jawaab weyn oo ah in tareenka xawaaraha sare uusan joogin Kocaeli
Rugta Ganacsiga Giresun waxay ka jawaabtay wadada tareenka
TCDD ayaa ka jawaabeysa Amarka Ururada Shaqaalaha
Shaqaalaha tareenada ayaa ka jawaabaya musuqmaasuqa
UND waxay wax ka qabataa dhaqanka Iran
Rakaabka ku yaal tareenka xawaaraha sare leh (Video)
BTS waxay wax ka qabataa go'aanka Tareenka Sirkeci
Diiwaangelinta Yaan Bixinta Yaan
Duqa Magaalada Özcan: Waan U Socon doonaa Ankara Haddii Loogu Baahan Yahay Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare ee Bolu